Xasaasi: Wargayska Mundo Diportivo Oo Aaminsan In Garsoorihii Dhex-Dhexaadinayay Real Madrid Iyo Bayern Munich Uu Saamayn Ku Lahaa Kulankii Xalay Barcelona Bar-baraha La Gashay Juventus Laakiin Sidee – Kooxda.com
Home 2017 April Champions League, Italy, Spain, Wararka Maanta Xasaasi: Wargayska Mundo Diportivo Oo Aaminsan In Garsoorihii Dhex-Dhexaadinayay Real Madrid Iyo Bayern Munich Uu Saamayn Ku Lahaa Kulankii Xalay Barcelona Bar-baraha La Gashay Juventus Laakiin Sidee
Xasaasi: Wargayska Mundo Diportivo Oo Aaminsan In Garsoorihii Dhex-Dhexaadinayay Real Madrid Iyo Bayern Munich Uu Saamayn Ku Lahaa Kulankii Xalay Barcelona Bar-baraha La Gashay Juventus Laakiin Sidee
April 20, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Wargayska Mundo Diportivo ee ka soo baxa Spain ayaa soo saartay warbixino ay kaga hadlaysay kulankii xalay ay kooxda Barcelona bar-baraha la gashay kooxda Juventus kulan ka tirsanaa lugtii 2-aad ee wareega 8 dhamaadka tartanka champions league.
Wargayskan oo ku dhow kooxda Barcelona ayaa sheegaya in go,aamadii uu qaatay garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulankii Real Madrid iyo Bayern Munich ay saamayn ku yeelatay go,aamadii uu qaadanayay garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulankii xalay u dhexeeyay kooxaha Barcelona iyo Juventus.
Mundo ayaa sheegtay in uu garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulankii xalay uuna go,aan adag ka qaadanayn xiddigaha kooxda Juventus oo si xun ula ciyaarayay xiddigaha Barcelona waliba dagaal hoose ku waday iyada oo tusaale ka dhigatay dhacdadii uu Lionel Messi qoorta wax uga noqon gaaray.
Wargayska ayaa sidoo kale aaminsan in dagaalka ay xiddigaha Juventus ciyaarayeen si weyn u qaboojisay xamaasadii ku jirtay xiddigaha Barcelona taasna ay sabab u noqotay in ay xiddigaha Barcelona awood u lahaan waayaan in ay kubad ciyaaraan.
Xilli ay sidoo kale sheegtay in Garoorahani Maray wadadii uu maray midkii dhex-dhexaadinayay kulankii ay Kooxda Real Madrid ka gaartay Guusha kooxda Bayern Munich.
Filed in: Champions League, Italy, Spain, Wararka Maanta